स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ–सबै नागरिकलाई खोप निशुल्क दिन्छौं, हतारमा ठगीको सिकार नबनौं – Health Post Nepal
स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ–सबै नागरिकलाई खोप निशुल्क दिन्छौं, हतारमा ठगीको सिकार नबनौं
२०७८ असार १४ गते १८:५७
काठमाडौं लगायत शहरी क्षेत्रमा कोरोना खोप ( कोभिसिल्ड)को अवैध विक्रि–वितरणबारेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चासो देखाएको छ।
अवैध रूपमा नक्कली खोप नेपाल भित्रिएको र एक डोजको प्रति मूल्य ५ हजारसम्म विक्रि–वितरण भएको सूचना बाहिरिएसँगै मन्त्रालयले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेलले बताए।
‘बजारमा नक्कली खोपको विगविगी बढेको हल्ला चलिरहेको छ। यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलको ध्यानकर्षण भएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘हामीले अनुसन्धान थालेका छौं। पुष्टि भए कारबार्ही हुन्छ।’
डा. पौडेलले नेपाल सरकारले कोरोना खोप निशुल्क वितरण गर्दै आएको भन्दै पालो कुुरेर खोप लगाउन आग्रह गरे।
‘सञ्चार माध्यममा खोपमा अनियमितता तथा अवैध बित्रि–वितरण भएको भन्ने सुनिएको छ। छानबिन भएर पुष्टि भएको खण्डमा कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ,’ डा. पौडेल भन्छन्।
सरकारले खोप बित्रि–वितरण गर्न लगाएको छ।
उनका अनुसार जो–कसैले मर्यादा भन्दा बाहिर गएर काम गरेको रहेछ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यलयले कारबार्हीको दायारामा ल्याउने छ।
‘हामीले जिल्ला प्रशासनलाई खोपको अवैध विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छौं। खोपको दुरूपयोग गर्न पाइँदैन। सरकारले बिक्रि–वितरणमा रोक लगाएको छ। पुष्टि भयो भने कानुन अनुसार कारबार्ही गछौं,’ डा. पौडेल भन्छन्।
‘सरकारले कोरोना खोप निशुल्क वितरण गरिरहेको छ। उमेर समूह तथा आवश्यक क्षेत्र अनुसार पालै–पालो खोपको वितरण हुँदै आएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘कसैले पनि शुल्क मागेर कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने कुरा गरेमा वा यस्ता ठगी गर्नेकोहरूको जानकारी भएमा तुरुन्तै स्थानीय प्रशासनमा प्रशासन वा मन्त्रालयमा उजुरी गनुहोस्।’
नेपालको पूर्वीनाकाहरूबाट काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा ल्याइ अवैध रूपले कोभिसिल्ड खोप भन्दै लुकीपछपी ३ देखि ५ हजारसम्म विक्रि वितरण भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले हिजो प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो।